नेपाल आज | प्रेमीसँग मिलेर आमाको हत्या प्रकरणः कहाँ गयो २२ लाख रुपैयाँ?
प्रेमीसँग मिलेर आमाको हत्या प्रकरणः कहाँ गयो २२ लाख रुपैयाँ?
काठमाडौं । कन्ट्र्याक्ट किलर बोलाएर आमाको हत्या गरिएको घटनामा पक्राउ परेका चार जनामध्ये दुईलाई सात र दुई लाई ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरी परिसर भक्तपुरले म्याद थप गरेको छ । मोहम्मद नौसाद र छोरी ईश्वरी भट्टराईलाई सात दिन र चक्कु प्रहार गर्ने मोहम्मद रहिस र सहयोग गर्ने अर्जुन भनिने भोला कुमारलाई ६ दिन थुनामा राख्न अदालतबाट म्याद लिइएको हो । गत आइतबार भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका ७ बाँसबारीस्थित घरमा सावित्री भट्टराईको घाटी रेटी हत्या गरिएको थियो ।
हत्याको मुख्य कारण भक्तपुरको कमलविनायकस्थित एक गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने सिरहा विष्णुपुर स्थायी घर भई भक्तपुरको पुरानो ठिमी बस्ने २३ वर्षीय अविवाहित मोहम्मद नौसादसँग मृतककी कान्छी छोरी ईश्वरीको विवाहेत्तर प्रेम रहेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । हत्याको घटनासंगै परिवारका सदस्यले घरबाट २२ लाख हराएको प्रहरीमा बताए पनि त्यसको गुत्थी सुल्झिन सकेको छैन । प्रहरी परिसर भक्तपुरका एसएसपी सविन प्रधानका अनुसार मृतकका परिवारका सदस्यले घरमा रहेको २२ लाख फेला नपरेको बताएका छन् । प्रहरीका अनुसार मृतककी भारतमा रहेकी जेठी छोरीका निम्ती जग्गा किन्न भन्दै २२ लाख जुटाइएको थियो ।
मोहम्मद नौसाद गजुरीमा रहेको र उनीहरूबीच पैसाको कुरा भएको देखिएको छ । महाशाखाको विशेष टोलीले पक्राउ गर्दा मोहम्मद रहिस र अर्जुनकुमारले बेर्खची भएको र पैसा पाउने आशमा हेटौंडामा कुरी बसेको बताएका थिए । गजुरीबाट पक्राउ परेका मोहम्मद नौसादको साथमा पनि प्रहरीले पैसा भेटाएन । प्रहरीका अनुसार रहिस र अर्जुनकुमारले हत्या गरेबापत पाउने भनेको दुई लाख नपाए जे पनि गर्न सक्ने भन्दै धम्की दिएका थिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
आमाको हत्या प्रकरण